🥇 ▷ Mistery Nintendo Switch qalab isugeyn isboorti ah oo loo yaqaan 'Ring-Con', wuxuu imaanayaa bisha Oktoobar ✅
Mistery Nintendo Switch qalab isugeyn isboorti ah oo loo yaqaan ‘Ring-Con’, wuxuu imaanayaa bisha Oktoobar
Nintendo waxay sameyneysaa qalab cusub oo loogu talagalay ‘Switch console’ usbuucii hore, hadda waxaan ognahay waxa ay taasi tahay.
Waxaa loogu yeeraa “Ring-Con”, waa koox jimicsi lagu qurxiyo oo caag ah halkaas oo aad dhigto kontoroolada Joy-Con si ay ula falgalaan ciyaar qaas ah, Ring Fit Adventure.
Waxaad sidoo kale heleysaa lugo rasmi ah oo lugta ah ciyaartaan, adoo raadraacaya dhaqdhaqaaqa ciyaartoyga iyada oo loo marayo nashaadaadyo kala duwan oo jireed.
Ciyaartu waxay u keentaa ciyaartoy “ballaaran oo adduunka” oo leh cadow si ay ula dagaallamaan tababar jir ahaaneed adduunka dhabta ah. Ku biirista iyo tuujinta Ring-Con ayaa dhaqaajin doona jilayaasha oo way weerari doonaan, tusaale ahaan.
Waxa jira caqabado heerar kala duwan oo jirdhiska ah iyo noocyo jidhka ah, iyo Ring Fit Adventure ayaa la hagaajin karaa si loogu habeeyo heerar xirfadeed oo kala duwan oo ciyaartoy ah.
Madaxweynaha Nintendo ee Yurub Stephan Bole ayaa yidhi: “Waxay ku taal Nintendo DNA in si joogto ah looga fikiro qaabab cusub oo lagu madadaaliyo ciyaartooyda oo loo dhoola cadeeyo.
“Waxaan rajeynayaa in marka ay ciyaartoygu qabtaan Ring-Con, ay cagta saaraan oo ay bilaabaan inay iyagu iskood u ciyaaraan, waxay u safri doonaan iyaga oo ku dhiirigalin doona inay ku soo laabtaan oo ay jimicsi ku raaxeystaan ​​maalin kasta.”
Jimicsigu wuxuu qayb ka ahaa qorshooyinkii hore ee loo yaqaan ‘Nintendo’ console planning, waagii hore, Wii Wii guddiga guddiga ayaa markii ugu horreysay la soo saaray 2008. Hase yeeshe, si ka duwan guddiga, Ring-Con wuxuu u muuqdaa inuu leeyahay is-dhexgal kala duwan oo kala duwan iyo, isagoo ku soo bandhigaya wax ka badan hal ciyaar halkii oo ah barnaamij tababar, waxay umuuqataa hab fiican oo qoyska oo dhan uga qeyb qaadan karo.
Bilaabidda Oktoobar 16 qiimaha ingiriiska ayaan wali la shaacin inkasta oo amarro horay loo furi doono, sidaa darteed waa inaan wax badan ka ogaanno.